Zvese zvaunoda kuti uzive nezve yakasviba modhi yeIOS 13 | IPhone nhau
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 13 yakasviba modhi
Tinoenderera mberi kuyedza iOS 13 kudzamara taneta, uye ndezvekuti nekufamba kweshanduro dzeBeta nhau zhinji dzichiuya, zvisinei, musoro wenyaya watinoisa patafura nhasi uye kuti tinoenda nevhidhiyo kubva kuYouTube chiteshi chinoperekedza iOS 13 kubvira payakatangwa, isu tinotaura sekufunga kwaungafungidzira ivo vanokudzwa maitiro erima iyo inouya mune ino yazvino vhezheni yeIOS kune vese vashandisi.
Sezvinowanzoitika uye sezvo pasina munhu anozvarwa achiziva, zvakakosha kuti nharaunda yedu yese yevaverengi uye vanyoreri vazive izvo zvakanakira nzira yerima, uyezve nemaitiro ekuibata. Isu tinokudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve yakasviba modhi yeIOS 13 uye ubate sekunge iwe uri nyanzvi Join us!
1 Yerima modhi mune zvigadziriso uye Control Center
2 Rima modhi pane iyo Wallpaper
3 Zvakanakira kuve nerima modhi yakavhurwa
Yerima modhi mune zvigadziriso uye Control Center
Icho chikuru nzira dzekuwana kune yakasviba modhi pane maviri:
Kudzora nzvimbo: Kuburikidza neControl Center tinogona kukurumidza kuiwana nekuidzikisa, tichimanikidza kudzamara ichiita iyo 3D Kubata kana Haptic Kubata chiito pamusoro pechiedza uye ipapo sarudzo nhatu dzinozoonekwa pazasi: Aspect - Night Shift - Ichokwadi Tone. Pamberi peIOS 13, vaviri chete vakaonekwa. Nekudzvanya pane Aspect isu tinokwanisa kusarudza kuti torega iyo yakasviba modhi kusvikira zuva rinotevera rabuda roga.
Kuburikidza neZvirongwa: Kana tikapinda muChikamu cheMisarudzo uye sarudza Screen uye Kupenya isu tinokwanisa kudzora zvakasarudzika sarudzo dzerima modhi, senge kutonga chirongwa chakatemerwa, kusarudza kumisikidza kana kudzima otomatiki uye nemaoko sarudza pakati pechiedza modhi uye nerima nzira.
Rima modhi pane iyo Wallpaper
Iyo Wallpaper yave ikozvino yatora yechienzi basa nekuda kune yakasviba modhi. Kana tikapinda muZvikamu chikamu uye sarudza Wallpaper isu zvakare tichakwanisa kuwana mamwe marongero akasarudzika emamiriro erima uye maitiro azvinoita neiyo Wallpaper.
Dimisha iyo Wallpaper kana rima modhi ichiitwa. Izvi zvichaita kuti riwedzere dimmed Wallpaper. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti isu tinowana maviri marudzi emifananidzo, Apple's default avo ane avo akasiyana avo erima modhi, uye "standard" edition iyo inouya mukuita kana isu tine iyi sarudzo yakaitwa. Izvi zvinogadzirisa mifananidzo yatinayo se Wallpaper nekudzikisira iko kubuda uye kupenya, zvisinei, iyi sarudzo inopa zvisingaiti mhedzisiro inoita kuti isakurudzirwe kune avo vashandisi vane yavo mifananidzo se Wallpaper sezvo ichivaita kuti vaoneke kunge asiri echokwadi.
Apple mapikicha: Aya mapikicha atichangobva kutaura nguva yadarika ndeaya mana ekutanga akaisirwa neApple muIOS 13 uye anoshandura zvakanyanyisa ruvara kana iyo nzira yerima yakavhurwa, ichichinja matoni avo machena kuita matema. Aya mapikicha ezvezvino ndeavo chete anopihwa nekambani yeCupertino pachayo uye haitarisike sekunge paine zvimwe mune ramangwana.
Zvakanakira kuve nerima modhi yakavhurwa
Kunyanya vamwe vashandisi veApple vanotenda kuti rima modhi haingori inonakidza chete mumamiriro akasiyana, asi zvakare inochengetedza bhatiri. Izvi ndezvechokwadi, asi nema nuances. Iyo yakasviba modhi inongokwanisa chete kupa imwe bhatiri yekuchengetedza patinotaura nezve zvishandiso zvinokwidza OLED kana AMOLED skrini, uye izvi hazvisi izvo zvakanyanya kuwanda pamusika. Ehe, inokwanisa kugadzira imwe bhajeti kuchengetedza iine iyo yakasviba modhi yakaitwa zvachose, asi sekureba sekutora iyi diki diki kufunga.
Naizvozvo, iyo yakasviba modhi inongochengetedza hupenyu hwebhatiri pane iyo iPhone X uye iPhone XS kubvira iyo iPhone XR kana mamodheru apfuura ane maLCD masikirini asingadzime mapikisheni ega ega (iwo akadzoserwa kumashure) uye nekudaro bhatiri rinoshandiswa rinenge rakaenzana kunyangwe paine hukuru hukuru hwekupokana hune Liquid Retina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 13 yakasviba modhi
Apple Watch inodzoka ku "ponesa" hupenyu hwemurume ane makore makumi mana nemasere
Mangani zvikumbiro zveruzivo kubva kune vashandisi veApple neHurumende yeSpain zvinorambwa?